Hub Badan Oo Si Qarsoodi Loo Geliyay Addis Ababa Iyo La Qabtay – somalilandtoday.com
(SLT-Addis Ababa)-Ciidanka Booliska Magaalada Addis Ababa ee Caasimada dalka Itoobiya ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen hub badan oo ah nooca fudud oo si qarsoodi ah loo geliyay Magaaladaas, kadib markii ay ka warheleen hubka Hay’addaha amniga.
Warbixin ay soo saareen Booliska Addis Ababa ayey ku sheegeen in hubka lagu soo dhex qariyay gaadhi, loona ekeysiiyay agab oo markii hore loo malaynayay budo la shiiday, waxaana hubkaas ka koobnaa BKM, Biskoolado iyo 5 kun oo Rasaas kala duwan ah.
Saraakiisha Booliska ayaa tilmaamay in sidoo kale gacanta lagu dhigay laba nin oo gudbinayay hubka la geliyay Magaalada, isla markaana xusay in hubkaas uu sharci darro ahaa, hayeeshee laga hortegay.
“Hubka la qabtay ayaa isugu jiray 2 (BKM), 38 Bistoladaha waawayn iyo 25 Bistoolado yaryar, 5992 rasaasta Qoriga Akaha, 898 rasaasta Bistooladaha, 5 rasaasta Qoriga daba-miinshaarka, iyo agabyada Qoryahaa” ayaa lagu yidhi Warbixinta lasoo saaray.
Saraakiisha amniga Magaalada Addis Aba bee Caasimada dalka Itoobiya ayaa shacabka ugu baaqay inay la shaqeeyaan hay’addaha amniga Magaalada, si looga hortego waxyaabaha sharci darrada ah ee lasoo geliyo.